Iphosta entsha ye Star Wars: IJedi yokugqibela ibonisa kwakhona obomvu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ULuka Skywalker ubuyela kwi-Star Wars emva kokwenza imbonakalo ye-epic Ekupheleni kweMfazwe yeNkwenkwezi: Umkhosi uyavusa. Le Khrisimesi siza kuba nayo yonke indalo eyenziwe nguGeorge Lucas apho imikhosi yokulungileyo nokubi ijongana khona ebalini eyeyona ndawo isesona siqendu sakha sahlala sikhona.
Kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo sizimase Itreyila entsha yesiQendu 8: IJedi yokugqibela kunye neposta entsha Kwimovie. Oku kukhokelela ngqo kwimvakalelo yokuba kuya kubakho igazi elininzi kunye nokulwa kakhulu. Ubomvu wepowusta ubonakalisa isimilo esifana nesomlo sale fakelo intsha yale saga, ephethwe yiDisney okoko ithenge amalungelo kuGeorge Lucas.
El Ipowusta ibonisa i-vusal symphony ebomvu kwaye, njengoko besitshilo kwaye Sidibene kwiinyanga ezili-9 ezidlulileyo xa siqala ukubona olo tshintsho kwilogo, iphakamisa ukuba izinto ziya kuba ligazi elininzi kwinxalenye yesibini yesithathu ye-Star Wars trilogy. Singaphantse sithi oko kwabonwa kwi-The Empire Strikes Back kuyaqhubeka, ukuze iJedi yokugqibela iye kweyona ndawo imnyama kwindalo iphela ye-Star Wars.
Kwakhona, iqela lobugcisa, emva kokuphunyezwa kwale powusta, Akafunanga kushiya nabaphi na abona baphambili kolu fakelo lutsha lwe Star Wars, Sino Rey, kunye nesibane sakhe sokukhanya, kunye noKylo Ren, umchasi wakhe ngekrele lakhe elinentetho encinci yezenkolo.
Phawula uGeneral Leia embindini wepowusta, Njengonikelo kuCarrie Fisher, osishiye kunyaka ophelileyo. SineChewbacca, R2-D2 kunye neC-3PO. Ifilimu entsha ye-Star Wars eza kukhutshwa ngo-Disemba 15, ke ikrisimesi enomdla kakhulu kulindeleke apho icala lomkhosi lilindele khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Le yipowusta entsha ye-Star Wars: IJedi yokugqibela kwaye icebisa ukuba kuya kubakho igazi
Uyilo luhle kakhulu, ndiyayithanda imvumelwano phakathi kombala nezinto ...